प्रचण्ड र केपी ओली बीच नयाँ मन्त्रीको नाम: पुलिस तपाइँ, उहाँचाहिँ न्यायाधीश ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » ब्लग » राजनीति » समाचार अंक: 5448
प्रचण्ड र केपी ओली बीच नयाँ मन्त्रीको नाम: पुलिस तपाइँ, उहाँचाहिँ न्यायाधीश !
खोज केन्द्र बुधबार, आश्विन २८, २०७७ मा प्रकाशित
लक्ष्मीबहादुर कस्ता व्यक्ति हुन् भने, ज्ञानेन्द्र सरकारले अख्तियार र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै शाही आयोग गठन गर्दा त्यसको बचावका लागि अन्तिमसम्म लागिपरेका । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि फैसला हुने बेलामा दरबारले लक्ष्मीबहादुरलाई लबिङ गर्न खटायो ।
न्यायाधीश रामनगिना सिंह सँगसँगै वकालत गरेका कारण उनी पाखुरा सुर्किंदै न्यायाधीशकहाँ पुग्न थाले । ‘दायाँबायाँ गर्‍यौं भने दरबारले सिध्याउला’ सम्म भन्दै तर्साए । र, दरबारमा गएर उनले राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई सुुनाए, ‘रिट खारेज हुने भयो नि !’ तर, फैसला उल्टो आयो, शाही आयोग खारेज पो भयो । यसपछि के गर्ने भनेर पशुपतिभक्तको घरमा छलफल भयो । त्यहाँ लक्ष्मीबहादुर निराला, सेना र प्रहरी प्रमुखसहित न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव काशिराज दाहाल थिए । काशीले ‘अब के गर्ने ?’ भनेर सोधे ।